Ukhenketho lonxweme lwaseSorrento luhamba emva kokuSasazeka kwesifo esiBodwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ukhenketho lonxweme lwaseSorrento luhamba emva kokuSasazeka kwesifo esiBodwa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Unxweme lweSorrento-Ifoto © Mario Masciullo
Unxweme iSorrento, enye yeendawo ezimbalwa zabakhenkethi zase-Italiya, ukongeza kwi-Amalfi Coast, eyayingenisa ababhali kunye neembongi zeGrand Tour phakathi kwenkulungwane ye-18 neye-19, ibangela ukuhamba kweendwendwe zamanye amazwe, ukuya kuthi ga kwixesha lobhubhane eliyintlekele. ukubuyisa kancinci kweli hlobo lango-2021.
Unxweme lwaseSorrento lunamaxesha akutshanje litsale abakhenkethi base-Italiya kunye nabaphambukeli abambalwa.
Le meko ibuyiselwe umva ngokupheleleyo ukusukela ngo-1919 kwaye kukuphola okuneentloni okulindele ukubuyela kwixesha elidlulileyo.
Ukusilela ngokuhamba kwexesha ngenxa yobhubhane akutshintshanga mpawu kunye nezithethe eSorrento nakwindawo entle entle.
Ngokukodwa, iminikelo yemveli yokupheka ecetywayo ziivenkile zokutyela kunye neetattorias eSorrento nakwiidolophu ezikufutshane, ukongeza kwiindawo zokutyela eziqhutywa ngabapheki abanenkanyezi abanjengoIl Buco kunye noDonna Sofia, owokugqibela oyintandokazi yomfanekiso bhanyabhanya wase-Italiya uSofia Loren, uhlala emnandi njenge ngonaphakade.
Ngethamsanqa, yonke into ihlala ingatshintshi ukuze kuxhamle iindwendwe eziqhelekileyo ezonwabileyo kukufumana abaphathi bokutya abathe baba ngabahlobo ngokuhamba kwexesha kwaye baphinde bafumanisa iimenyu zakudala. Olu luhlobo lwentlonipho ngokunjalo ukulungiselela izizukulwana ezitsha, ezibukho bazo babonwa ekupheleni kukaJulayi.
Jonga ihotele iMediterraneo kunye nendawo yayo yangasese yokubhukuda-Ifoto © Mario Masciullo
Isiko lehotele eSorrento
Isixeko saseSorrento Uluhlu lweehotele ezingama-120/30, ikakhulu ezenziwa ziintsapho-isiko elinikezelweyo ngaphezulu kwekhulu leminyaka. Ngeli xesha lexesha, uninzi lwezakhiwo ziye zaba ziindawo zokuhlala ezihloniphekileyo ngenxa yamava olawulo kunye negalelo lezoqoqosho elivela kukhenketho nakwezinye iindawo ezingaphaya.
I-MD kunye noPietro Monti, ihotele iMediterraneo, eSorrento-Ifoto © Mario Masciullo
Imbali yeTyala elinomdla
Ibali elinomdla elijulelwe nguSergio Maresca, uMlawuli oPhetheyo (MD) wehotele iMediterraneo, onesiko lakhe elide lokubuk 'iindwendwe kunye notshintsho kwizizukulwana ngaphezulu kweminyaka eli-100, kwaye lihlelwa "njengembali yembali" eyodwa.
Ekuqaleni, le hotele yayiyindawo yokuhlala yabucala eyakhiwa ngo-1912 kwaye yajikwa yaba yihotele ngu-Antonietta Lauro, "umakhulu u-Etta," udade womnini nqanawa u-Achille Lauro, umakhulu notatomkhulu wabo baphethe ihotele ngoku.
“Izizukulwana ziphumelele kwaye amaqabane amatsha osapho azibandakanye neshishini, kodwa umoya wokubuk 'iindwendwe awuhlali unjalo. Kithina, le ihlala iyindlu enkulu enosapho oluhle olongezelelekileyo kwabo sisebenzisana nabo kunye nabathengi bethu abadala nabatsha nabahlobo, ”yatsho i-MD yehotele.
Hlaziya ukujongana nekamva
Umrhumo wesibonelelo uvela kumthetho we-Attitalia kulwakhiwo ngokutsha lweehotele ezinkulu ezili-12 eSorrento. Injongo yalo msebenzi ibikukunyusa umgangatho wobonelelo lweehotele ngokunika abafaki zicelo isibonelelo esingahlawulekiyo kunye nemali mboleko yenkxaso.
I-peninsula yaseSorrento, phakathi kwezinye izinto, kufanelekile ngokubakho malunga ne-15% yokuhamba kweCampania kunye ne-30% yephondo laseNaples, kunye neakhawunti malunga ne-0.75% yombutho wonke wezokhenketho wehotele.
Kule meko, ukuthanda ukwazi kwabangela ukuba kwenziwe uphando ngodliwanondlebe nodliwanondlebe noPietro Monti, uMlawuli weNtengiso wepropathi ye-Ultra-Centennial kwindawo yaseSorrento, athetha ngayo uMd.
Imboleko-mali, ngokukaPiero Monti, yayityaliwe ukuphucula ihotele enomfanekiso omileyo kuwo onke amacandelo endawo yokuhlala eneempahla ezibonisa isitayile saselwandle ngesitshixo esihle sanamhlanje. Isitayile esisetyenzisiweyo sasiyimfashini kwaye isisombululo esisebenza kakhulu esenziwe ngezinto ezingasetyenziswanga ezinje ngonxweme - iVesuvian lava, ipharaji yomgangatho ekhumbuza izibonda ezakhiwe elwandle, izibane zendlela yabalobi, kunye nemihombiso kunye neekhabhathi ngobhedu - into eqhubayo Iingcambu zawo kwisithethe seNeapolitan.
Indawo yokutyela e-Donar Sofia igcinelwe iindwendwe ezikhethekileyo- Ifoto © Mario Masciullo
Ukongeza kweli candelo le-gastronomic kunye notshintsho lwethambeka lalo kwi-SkyBar entle kunye nembono ye-panoramic kwi-Bay yaseNaples ukuya kwiVesuvius volcano. I-yacht enamandla yemoto iyafumaneka kwiindwendwe zokuya kwisiqithi esikufutshane saseCapri okanye kwenye indawo. Ukulungiswa kunye neenkonzo ezintsha kubandakanya ulwandle lwabucala lafumana ihotele enye inkwenkwezi, ukuyenza namhlanje ihotele eneenkwenkwezi ezi-5.